Maxamed Bin Salmaan oo booqasho deg deg ah ku tagaya dalka Turkiga | dayniiile.com
Home WARKII Maxamed Bin Salmaan oo booqasho deg deg ah ku tagaya dalka Turkiga
Maxamed Bin Salmaan oo booqasho deg deg ah ku tagaya dalka Turkiga
Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan ayaa Maalintii Isniin aheyd booqasho gobolka ah ay uga billaabatay Masar, isaga oo sidoo kale tagi doona dalka Turkiga oo uu dublumaasi Sacuudi ah ku sheegay in lagu xoojin doono xiriirka dalalka gobolka.
Dublumaasiga ayaa sheegay in booqashada Qaahira ka dib uu Amiir Maxamed booqan doono dalka Urdun ka dibna uu u sii gudbi doona Turkiga.
Inta uu booqashadan ku jiro ayuu kala hadli doonaa “arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyo iskaashiga caalamiga ah ee mustaqbalka” isaga oo intaa ku daray in heshiisyo maalgashi iyo tamarta ah ay kala saxiixan doonaan.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in Amiir Maxamed uu 22-ka bishan June booqan doono Turkey.
Waxa ay noqon doontaa booqashadii ugu horreysay ee uu ku tagto Turkiga tan iyo dilkii foosha xumaa ee gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul loogu geystay Jamal Khashoggi, dilkaasi oo argagax ku abuuray caalamka, dhaawac xoogganna u geystay xiriirka labadan dal.
Booqashadan, oo daba socota mid uu Erdogan bishii April ku tagay Sacuudiga, ayaa sii xoojineysa dadaallada lagu hagaajinayo xiriirka labada dal.
Diblumaasi Sacuudi ah ayaa sheegay in Amiir Maxamed sidoo kale la filayo in uu booqdo Greece, Qubrus iyo Aljeeriya, “dabayaaqada bisha July.”
Dowladda Sacuudiga ayaan weli xaqiijin safarrada uu Dhaxal-sugaha dalkaasi ku kala bixin doono dalalkaasi.
Previous articleMadaxweyne Deni oo Maanta Kulan gaar ah la yeelanaya Xildhibaannada, xilli ay wadaan mooshin
Next articleRa’iisul Wasaaraha Magacaaban oo wada kulamo uu codka kalsoonida uga raadinayo Xildhibaannada
Madaxweynaha Jubbaland “Maanta laga bilaabo waa la fasaxay dhamaan tageeradii iyo...
Wasaaradda Waxbarashadda oo shaacisay Jadwalka imtixaanka fasalka 12-aad